jsoup: HTML HTML Scrapper - Semalt Review
jsoup bụ nchekwa Java nke na-eme HTML. A kwadoro ya na API dị irè na nke dị irè na-anakọta, nyocha, ma na-ejikwa data mee ihe, jiri usoro DOM, CSS, na ụzọ jekery chọrọ.
Site na ndị mmemme jsoup na ndị na-emepụta weebụ nwere ike ịmepụta akwụkwọ site na faịlụ faịlụ weebụ n'enweghị nkwalite usoro nke faịlụ faịlụ - analytics express google. Mgbe ha weghachitere faịlụ ndị ahụ, site na ndị ọrụ nwere ike ịmegharị ma ọ bụ redesign ihe odide dum ma ọ bụ akụkụ components site na ịgbakwunye ma ọ bụ dozie ihe ma ọ bụ ọdịnaya ma ọ bụ abụọ.
A na-ewuli ngwá ọrụ ahụ iji rụọ ọrụ dị ukwuu iji mee ka ndị ọrụ na-eme mgbanwe na ọkọlọtọ usoro mmemme dị iche iche na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ na ngwa dịgasị iche iche. Nke a na-enye onye ọrụ ya ohere dị mkpa iji gbanwee, ihichapụ, ma ọ bụ gbakwunye ihe dị iche iche na mmepụta ha.
jsoup nwere ike ịhọrọ ma wepụ data n'ime ndị dị ntakịrị maka nsụgharị dị mfe n'ime usoro ndị ọzọ. A na-etinye data ntinye aka n'ụdị nke usoro algorithmic nke na-agụnye usoro ntuziaka ndị e wuru n'ime nchịkọta ma ọ bụ osisi e ji emepụta ihe. A na-ewu ya iji ghọta ma jikọta ihe ndị dị na HTML ka ọ nwere ike weghachite faịlụ ndị dị na mgbanwe dị otú a dabere na usoro nhazi. Kedu ka o si eme nke a? Ọ na-awagharị ma na-ehichapu ibe weebụ maka ohere na usoro iji weghara data. Ọ bụrụ na mmepụta data ga-ekwe omume, ọ ga-amalite site na:
Ịnyocha ma nyochaa osisi parse site na ọkwa ya dị elu site na nhazi nhazi ya na ala dị ala karị na-atụle akụkụ ọ bụla nke data.
Nchịkọta data site n'ogo kachasị elu nke usoro ahụ, nyochaa akụkụ data ọ bụla, site na nghazi nke etiti dị n'elu nke parse ma ọ bụ osisi nsị.
jsoup bụ ihe ngwọta dị irè nke na-enweta ọtụtụ ọrụ mgbagwoju anya n'ime oge nkeji nkeji n'ihi nhazi ya. Usoro ahụ na-agụnyekarị usoro nke atọ nke isi:
1. Nkọwapụta nke ihe ndị a napụtara na data
2. Nkọwa nke nwere ike ịgụta ma chịkọta ya site na asụsụ igwe nke nwere ike itinye ihe data ahụ ka ọ nwee ike ịhọrọ ya. ma enwere ike iji ya mepụta
3. Okwu ntanetị nke na-edepụta ozi nke nhazi, chobara na mkpa ya na onye ọrụ.
jsoup jikọtara ya ma nwee ike imezu nnukwu ihe odide HTML, interface asụsụ, mmemme na ụdị ihe odide gụnyere ihe WhatWG HTML5 chọrọ. Ha na-enwe ike idozi akụkụ HTML na otu Ihe Nlereanya Akụrụngwa dị ka ngwa ngwanrọ weebụ maka iji wepụ, na-agagharị ma na-egosi data na ihe ọmụma na weebụsaịtị Weebụ.
jsoup nwere ike:
kpochapu ma kpoo HTML site na URL, faịlụ, ma ọ bụ eriri
chọta na wepụ data, iji mpaghara DOM ma ọ bụ CSS họrọ
welie ihe HTML, njirimara, na ederede
ihichapụ ọdịnaya ndị ọrụ na-eme ka nchekwa dị ọcha, iji gbochie XSS ọgụ
Na-enye HTML dị mma
E wuru ngwanrọ ahụ iji dozie ụdị HTML ọ bụla n'agbanyeghị nhazi ahụ: site na nke ọma ma na-eme ka ọ dị mma, na-esighị ike: jsoup ga-emepụta nhazi usoro a chọrọ.